Kunzea eFreycinet - I-Airbnb
Kunzea itholakala enhliziyweni yedolobhana laseColes Bay. Shiya imoto ngemuva uhambe noma ugibele kungakapheli imizuzu ukuya kuzo zonke izitolo zasendaweni, ithaveni, kanye nerempu yesikebhe. Lesi sakhiwo sisemgwaqweni oholela ekungeneni kweFreycinet National park imizuzu embalwa nje uhamba.
UKunzea ubheke isiqiwu sehlathi lendabuko (elinamathrekhi okuhamba) ohlangothini lomgwaqo bese ubuyela eDoris naseRita Reserve, indawo enehlathi lendabuko elitholakala ngesango elingemuva futhi libamba izinyawo ezimbalwa - enye yazo eholela endaweni indawo yokubuka enokubukwa kweGreat Oyster Bay.
Impahla igezwa ilanga lonke, ilanga lasekuseni ligcwala indawo yokuhlala nelanga lantambama ligcwalisa i-patio engemuva negceke elingemuva.
Kukhona indawo yokugeza ye-spa endlini yokugezela ye-ennsuite.
Kunzea eFreycinet inendawo yokuzijabulisa enhle lapho ungajabulela khona ukudla kwangaphandle kanye ne-BBQ enkulu.
Iklanywe kahle ngokunethezeka kwakho engqondweni, lena yindlu yamaholide enhle yombhangqwana noma umndeni nabangane.
Ikhishi ngelesimanje futhi lihlome kahle futhi linomshini we-espresso wabathandi bekhofi.
Indawo yokuphumula, yokudlela nekhishi kuyipulani elivulekile.
Kukhona i-TV yesikrini esikhulu egumbini lokuphumula (ne-Chromecast) kanye ne-TV yesibili ekamelweni elikhulu - i-wifi yamahhala inikezwa.
Lesi sakhiwo singalala izivakashi ezingafika kwezi-5, kusetshenziswa umbhede ogoqayo. Kukhona umbhede wendlovukazi ekamelweni elikhulu, umbhede ophindwe kabili ekamelweni lesibili kanye nombhede olalayo wokuhlalisa ingane.
Le ndlu yamaholide inakho konke okudingayo ukuze ujabulele ukuhlala uphumule eduze neNational Park (ikhaya leWineglass Bay) nezinye izinto eziningi ezikhangayo.
- Ama-TV amabili
- Ukudla kwangaphandle
- Amakamelo okulala amabili
- Umbhede ongasodwa (owengane)
- Izindlu zokugezela ezimbili
- Ukugeza kwe-spa ku-ensuite
- Ilineni linikeziwe
- Umbhede kanye nesihlalo esiphezulu
4.56 · 54 okushiwo abanye
Eduze kwezindawo ezikhangayo kanye neNational Park. Uhambo olufushane oluya emakhefi, amabhishi, iTavern neJetty.
Asikushayeli ucingo kuphela uma udinga noma yiluphi usizo, nokho sikushiya uyimfihlo ukuze ujabulele ukuhlala kwakho.
Inombolo yepholisi: DA2016/00055